စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောဂျက်ကတ်များ၊ စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ဂျက်အိတ်၊ cheer varsity ဂျာကင်အင်္ကျီ၊ ရွှင်မြူးရန်အတွက်ပူနွေးသည့်အကျီများ၊
ဖေါ်ပြချက်:ရူ့ ၀ တ်မှုန့်အကျီများ၊ စိတ်ပါ ၀ င်စားသောဂျက်ကတ်၊,,,,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Cheer အဝတ်အစား > ပျော်ရွှင်ပါစေ
ပျော်ရွှင်ပါစေ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ရူ့ ၀ တ်မှုန့်အကျီများ၊ စိတ်ပါ ၀ င်စားသောဂျက်ကတ်၊, ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ခြေအိတ်များနှင့်အတူ Custom ထိပ်တန်းအရည်အသွေး Cheerleader ယူနီဖောင်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Highlight School နှင့် Academy Cheerlead Uniforms  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စိတ်ကြိုက်အဖွဲ့စွမ်းဆောင်ရည် cheerleading ယူနီဖောင်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Rhinestones တီလီစကတ်နှင့်အတူ Cheerleading ယူနီဖောင်းများ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စျေးပေါသောကခုန်အကျီများ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cheerleaders များအတွက်စိတ်တိုင်းကျအပြည့်အဝသူတော်ကောင်းတရား Varsity အဝတ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ထုံးစံသူတော်ကောင်းတရားကခုန်နွေး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Plus အားအရွယ်အစား Cheer Warm Up  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စိတ်တိုင်းကျအားပေးမှုအားကစားသမားဂျာကင်အင်္ကျီကိုနွေး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သူတော်ကောင်းတရားများကိုပူနွေးစေသောအကျီများဖြင့်စျေးသက်သာစွာဝယ်ထားသည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သိုးအားလုံးကြယ်ပွင့်အားပေးတဲ့နွေးဂျာကင်အင်္ကျီ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စိတ်တိုင်းကျလုပ် cheerleader ဆရာများနွေး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စိတ်တိုင်းကျရူ့နှင့်နွေးထွေးသောတက်နွေးဂျာကင်အင်္ကျီ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အက္ခရာအားလုံးကြယ်ပွင့် cheerleading နွေးဝတ်စုံ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စိတ်ကြိုက်သူတော်ကောင်းတရားရူ့နွေးထွေးသောဂျာကင်အင်္ကျီ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စိတ်တိုင်းကျလူငယ် Cheerleaders ဂျာကင်အင်္ကျီ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cheerleaders များအတွက်စိတ်ကြိုက် Tracksuits  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စိတ်တိုင်းကျရွှင်လန်း Tracksuit ထိပ်တန်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကောလိပ်အားလုံးကြယ်ပွင့်ရူ့နွေးထွေးသောတက်အကျီ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စျေးပေါတဲ့ထုံးစံအကအဖွဲ့အကျီများ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Csutom အားပေးကူညီခြင်းနှင့်ကခုန်လုပ်နေသောအင်္ကျီအကျီ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ခြေအိတ်များနှင့်အတူ Custom ထိပ်တန်းအရည်အသွေး Cheerleader ယူနီဖောင်း
ခြေအိတ်များနှင့်အတူ Custom ထိပ်တန်းအရည်အသွေး Cheerleader ယူနီဖောင်း ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား - ရွှင်လန်းမှုအလေ့အကျင့်များဝတ်ဆင်ခြင်း / စတား Cheerleading ယူနီဖောင်းအားလုံး ထောက်ပံ့ရေးအမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု အထည်: polyester /...
Highlight School နှင့် Academy Cheerlead Uniforms
Highlight School နှင့် Academy Cheerlead Uniforms ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား - ရွှင်လန်းဖွယ်ကောင်းသောအလေ့အကျင့်များဝတ်ဆင်ခြင်း / စတား Cheerleading ယူနီဖောင်းအားလုံး ထောက်ပံ့ရေးအမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု အထည်: polyester / spandex...
စိတ်ကြိုက်အဖွဲ့စွမ်းဆောင်ရည် cheerleading ယူနီဖောင်း
စိတ်ကြိုက်အဖွဲ့စွမ်းဆောင်ရည် cheerleading ယူနီဖောင်း ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား - ရွှင်လန်းမှုအလေ့အကျင့်များဝတ်ဆင်ခြင်း / စတား Cheerleading ယူနီဖောင်းအားလုံး ထောက်ပံ့ရေးအမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု အထည်: polyester / spandex ဒီဇိုင်း -...
Rhinestones တီလီစကတ်နှင့်အတူ Cheerleading ယူနီဖောင်းများ
Rhinestones တီလီစကတ်နှင့်အတူ Cheerleading ယူနီဖောင်းများ ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား - ရွှင်လန်းမှုအလေ့အကျင့်များဝတ်ဆင်ခြင်း / စတား Cheerleading ယူနီဖောင်းအားလုံး ထောက်ပံ့ရေးအမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု အထည်: polyester / spandex...
စျေးပေါတဲ့ကခုန်အကျီများ ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: Cheer Warm up ထောက်ပံ့ရေးအမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု အထည် : Lycra (အပေါ်) + Organza (စကတ်) / အခြားသူများ + mystique +...
ထုံးစံသူတော်ကောင်းတရားကခုန်နွေး ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: Cheer Warm up ထောက်ပံ့ရေးအမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု အထည် : Lycra (အပေါ်) + Organza (စကတ်) / အခြားသူများ + mystique +...
Plus အားအရွယ်အစား Cheer Warm Up ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: Cheer Warm up ထောက်ပံ့ရေးအမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု အထည် : Lycra (အပေါ်) + Organza (စကတ်) / အခြားသူများ + mystique +...
စိတ်တိုင်းကျအားပေးမှုအားကစားသမားဂျာကင်အင်္ကျီကိုနွေး ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: Cheer Warm up ထောက်ပံ့ရေးအမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု အထည် : Lycra (အပေါ်) + Organza (စကတ်) / အခြားသူများ + mystique +...
သူတော်ကောင်းတရားများကိုပူနွေးစေသောအကျီများဖြင့်စျေးသက်သာစွာဝယ်ထားသည် ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: Cheer Warm up ထောက်ပံ့ရေးအမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု အထည် : Lycra (အပေါ်) + Organza (စကတ်) / အခြားသူများ + mystique +...
သိုးအားလုံးကြယ်ပွင့်အားပေးတဲ့နွေးဂျာကင်အင်္ကျီ ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: Cheer Warm up ထောက်ပံ့ရေးအမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု အထည် : Lycra (အပေါ်) + Organza (စကတ်) / အခြားသူများ + mystique +...
စိတ်တိုင်းကျရူ့နှင့်နွေးထွေးသောတက်နွေးဂျာကင်အင်္ကျီ ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: Cheer Warm up ထောက်ပံ့ရေးအမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု အထည် : Lycra (အပေါ်) + Organza (စကတ်) / အခြားသူများ + mystique +...
စိတ်ကြိုက်သူတော်ကောင်းတရားရူ့နွေးထွေးသောဂျာကင်အင်္ကျီ ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: Cheer Warm up ထောက်ပံ့ရေးအမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု အထည် : Lycra (အပေါ်) + Organza (စကတ်) / အခြားသူများ + mystique +...
စိတ်တိုင်းကျလူငယ် Cheerleaders ဂျာကင်အင်္ကျီ
စိတ်တိုင်းကျလူငယ် Cheerleaders ဂျာကင်အင်္ကျီ ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: Cheer Warm up ထောက်ပံ့ရေးအမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု အထည် : Lycra (အပေါ်) + Organza (စကတ်) / အခြားသူများ + mystique +...
Cheerleaders များအတွက်စိတ်ကြိုက် Tracksuits
Cheerleaders များအတွက်စိတ်ကြိုက် Tracksuits ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: Cheer Warm up ထောက်ပံ့ရေးအမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု အထည် : Lycra (အပေါ်) + Organza (စကတ်) / အခြားသူများ + mystique +...
စိတ်တိုင်းကျရွှင်လန်း Tracksuit ထိပ်တန်း
စိတ်တိုင်းကျရွှင်လန်း Tracksuit ထိပ်တန်း ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: Cheer Warm up ထောက်ပံ့ရေးအမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု အထည် : Lycra (အပေါ်) + Organza (စကတ်) / အခြားသူများ + mystique +...
ကောလိပ်အားလုံးကြယ်ပွင့်ရူ့နွေးထွေးသောတက်အကျီ ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: Cheer Warm up ထောက်ပံ့ရေးအမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု အထည် : Lycra (အပေါ်) + Organza (စကတ်) / အခြားသူများ + mystique +...
စျေးပေါတဲ့ထုံးစံအကအဖွဲ့အကျီများ ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: Cheer Warm up ထောက်ပံ့ရေးအမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု အထည် : Lycra (အပေါ်) + Organza (စကတ်) / အခြားသူများ + mystique +...
Csutom အားပေးကူညီခြင်းနှင့်ကခုန်လုပ်နေသောအင်္ကျီအကျီ ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: Cheer Warm up ထောက်ပံ့ရေးအမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု အထည် : Lycra (အပေါ်) + Organza (စကတ်) / အခြားသူများ + mystique +...
တရုတ်နိုင်ငံ ပျော်ရွှင်ပါစေ ပေးသွင်း
Guangzhou Dandy အားကစားကုန်ပစ္စည်းများလီမိတက်သည်တရုတ်နိုင်ငံ၊ Guangzhou မြို့တွင်တည်ရှိပြီးဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်၍ အားကစားဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအထူးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံနှင့်ရုံးခန်းရှိသည်။ ၎င်းသည်စတုရန်းမီတာ ၅၀၀ ကျော်တွင် ၀ န်ထမ်း ၁၅၀ ကျော်ရှိသည်။ အားကစားအင်္ကျီများ၊ ဘောလုံးပစ္စည်းများ၊ ရပ်ဘီကစားသမားများ၊ ဘတ်စကတ်ဘောပစ္စည်းများ၊ trackuit နှင့်အခြားအလေ့အကျင့်များသည်ငါးနှစ်ကျော်မြင့်မားသော်လည်းအရည်အသွေးမြင့်မားသော်လည်းအပြိုင်အဆိုင်များသောစျေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချသည်။ သွင်းကုန်စက်များ၊ မှင်များ၊ ကြည်လင်သောစသည်တို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောအားကစားဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ကြယ်အားလုံးအကများဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။ အရောင်၊ အရွယ်အစားထည်စသည်တို့ဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတိုင်းအတွက် OEM / ODM ၀ န်ဆောင်မှုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တုန့်ပြန်မှု၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးအရည်အသွေးမြင့်ဂျာစီများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာခိုင်မာသောဖောက်သည်အခြေပြုအဝတ်အစားများနှင့်ပတ်သက်သောထောက်ခံချက်များကိုပေးသည်။ ခိုင်မာသောထုတ်လုပ်မှု၊ အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝပြီးအဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်ကကမ္ဘာအနှံ့ရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
ရူ့ ၀ တ်မှုန့်အကျီများ၊ စိတ်ပါ ၀ င်စားသောဂျက်ကတ်၊